Waan jeclahay taas oo ku saabsan Ciise, Kaniisadda Caalamka ee God Switzerland (WKG)
Markii la weydiiyay sababta aan u jeclahay Ciise, jawaabta kitaabiga ah ee saxda ahi waa: “Waan jeclahay Ciise maxaa yeelay isagu wuu i jeclaa markii hore iyo sababta oo ah wuxuu diyaar u ahaa inuu wax walba i siiyo (1 Yooxanaa 4,19). Taasi waa sababta aan u jeclahay Ciise shaqsi ahaantiisa, maahan kaliya qeybaha ama wajiyada isaga. Aniga sidoo kale waan jeclahay xaaskeyga sababtoo ah dhoola cadeynta, sanka ama sabirkeeda.
Haddii aad qof aad u jeceshahay qof, si dhakhso leh ayaad gacanta ugu hayn doontaa liis dheer, taas oo iyaga ka dhigaysa inay si gaar ah u soo jiitaan. Waan jeclahay Ciise maxaa yeelay maysan joogi laheyn isaga la'aanteed. Waan jeclahay Ciise maxaa yeelay isagu marna iima oggolaado. Waan jeclahay Ciise maxaa yeelay. , ,
Laakiin su’aashu waxay tahay majiraan wax aad u khaas ah oo kusaabsan Ciise oo macno weyn ii leh markaan ka fekero isaga jacayl !? Xaqiiqdiina - waxaa jira mid: "Waan ka jeclahay Ciise waxkasta, maxaa yeelay cafinimadiisu waxay ka dhigan tahay in aanan u baahnayn inaan u gudbiyo sawir quruxsan naftayda dadka kale, laakiin waxaan u furi karaa daciifnimadeyda, khaladaadkayga, xitaa dembiyada".
Aniga ahaan, raacitaanka Ciise ayaa ka sarreeya wax walba oo la taaban karo. Tani waa meesha dembidhaafkii Ciise sababay ay ku yimaadaan ciyaar. Waxaan u maleynayaa inay wax weyn tahay inaan marwalba qof walba la cadeynin inuu ahay qof aan dhammeystirnayn oo aan qumman ahay. Noloshan qalloocan ayaa maskaxdayda si ba'an igu burburinaysa. Dareemida joogtada ah ee waji-xidhka iyo waji-xidhka joogtada ah waxay qaadataa waqti iyo dareemaal badanaana kama shaqeeyaan dhamaadka.
Ciise wuxuu ku dhintay iskutallaabta dusheeda anigoo ku hadlaya dembiyadayda iyo khaladaadkayga. Haddii khaladaadkeyga mar hore la cafiyo, waa inay aad iigu fududaan aniga inaan qirto qofka aan runtii ahay.
Uma arko wax dhan oo ah rukhsad ka timid Ciise inuu khaladaad fara badan sameeyo ama aan ku adkaado dembiga. Cafisku ma dhaafo wixii tagay. Waxay sidoo kale ku siineysaa awood aad si dhab ah wax ugu beddesho. Awooddani laguma sharraxin oo keliya Kitaabka Quduuska ah natiijada ka timid xagga cafiska, runtii way i weecisay. Si kasta oo ay ahaataba, waxaa igu filan in aniga ila beddelo. Aad ayey muhiim ugu tahay xiriirkeyga lala leeyahay Ciise in iimaankeygu uu ka bilowdo dhaleeceynteyda. Kitaabka Quduuska ah, iimaanku wuxuu ku bilaabmayaa ka warqabka qof ku filnaansho iyo daciifnimo. Waxay cambaareyneysaa oo keliya kuwa aan gaalada ahayn iyo adduunka sharka, laakiin sidoo kale waxay rumeeysan yihiin. Buugaagta oo dhan ee Axdiga Hore waxaa loo hibeeyay siidaynta naxariis la’aanta ah ee xaaladaha reer binu Israa'iil. Buugaagta Axdiga Cusub oo dhammi waxay soo bandhigayaan xaaladda xun ee bulshooyinka Masiixiyiinta ah.
Ciise wuu sii daayay iyaga is-cambaareyn. Ugu dambeyntiina waad iska tuuri kartaa maaskaro oo waxaad noqon kartaa. Waa maxay nasasho!
waxaa qoray Thomas Schirrmacher